အပြာကား စွဲလမ်းမှုကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ – Gentleman Magazine
အပြာကား စွဲလမ်းမှုကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ
ယောင်္ကျားလေးတွေ အများစုက အပြာကားကြည့်ရတာကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန်ထက်ပိုပြီး ကြည့်နေမယ်၊ မကြည့်ရမနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အပြာကားတွေကို စွဲလမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအပြာကား စွဲလမ်းမှုကို ဘယ်လိုကုစားကြမလဲ…..???
၁။ တကယ်လိင်ဆက်ဆံမှု လုပ်ဆောင်ပါ။
အပြာကားစွဲလမ်းမှုကို ဖျောက်ဖျက်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ တကယ့် လက်တွေ့ဘ၀မှာ လိင်ဆက်ဆံမှု လုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါမှသာ သင့်စိတ်ထဲက လှုံ့ဆော်မှုတွေကို လက်တွေ့ကမ္ဘာမှာ ပုံဖော်လို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အမြင်နဲ့သာယာမှုကနေ ရုန်းထွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ တစ်ကိုယ်ရည် အာသာဖြေပါ။
တကယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အခွင့်အရေးမရဘူးဆိုရင် နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အာသာဖြေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သိပ်ပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ အပြာကားကြည့်ပြီဆိုကတည်းက မျက်လုံးနဲ့ လက်နဲ့တပြိုင်နက်လှုပ်ရှားကြသူတွေ များပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အာသာဖြေခြင်းက လိင်စိတ်နိုးကြားမှုကို လျော့ပါးသွားစေပါတယ်။
၃။ တကယ့်မိန်းကလေးတွေနဲ့ စကားပြောပါ။
အပြာကားစွဲနေသူတွေဟာ လူမှုရေးကို လစ်လျူရှုထားတတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်းနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြင်ပလောကနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းတာက လူမှုဆက်ဆံရေး စွမ်းရည်ကို ကျဆင်းစေပြီး အချင်းချင်းအပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှုလည်း အားနည်းသွားစေပါတယ်။ အပြာကားစွဲနေတာကို ကုစားချင်ရင်တော့ ပြင်ပလောကက တကယ့်မိန်းကလေးတွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ်၊ စကားပြောဆို ဆက်သွယ်ပါ။ အပြာဇာတ်လမ်းတွေမှာ ပုံဖော်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံစံနဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေက တကယ်လက်တွေ့နဲ့တခြားစီပါ။ ဒါပေမယ့် အပြာကားစွဲနေသူတွေက အတူတူပဲလို့ ထင်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တကယ့်မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်သွယ်ကြည့်တဲ့အခါမှ ဒီထင်မြင်ချက်က မှားနေတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာမှာပါ။
၄။ မိဘတွေနဲ့ နေပါ။
တစ်ယောက်တည်းနေတာက ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ဖို့ ပိုအားပေးရာရောက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းနေချိန်တွေမှာ အ၀တ်အစား မ၀တ်ပဲနေတာ၊ အရှက်ကို ထိန်းနေစရာမလိုတာ၊ အပြာကားတွေကို စိတ်ကြိုက်ကြည့်နေနိုင်တာ စသဖြင့် ဒီကိစ္စဆီကို ရောက်သွားနိုင်ချေ များပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိဘတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနားမှာ နေတာ၊ စကားပြောနေတာ၊ အလုပ်တွေ ၀ိုင်းလုပ်ပေးတာတွေက တစ်ယောက်တည်းလုပ်ချင်တာမလုပ်ရအောင် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ ၀ါသနာအသစ်တစ်ခု ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ပါ။
သင့်အတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ၊ လုပ်ချင်စရာ တစ်ခုခုမရှိတာကလည်း အပြာကားတွေ ကြည့်ဖြစ်စေဖို့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ၀ါသနာတစ်ခုခုကို ရှာဖွေ လုပ်ဆောင်ပါ။ တူရိယာပစ္စည်းတစ်ခုခု တီးတတ်အောင် သင်ကြားတာ၊ ဘာသာစကားသင်တန်းတစ်ခုခု တက်တာ၊ အားကစားတစ်ခုခုလုပ်တာ၊ စာဖတ်တာ၊ စာရေးတာ စသဖြင့် တစ်ခုခုကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ ၀ါသနာသစ်က အချိန်တော်တော်များများကို ယူသွားတဲ့အတွက် အပြာကားကြည့်ဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေ နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပွာကား စှဲလမျးမှုကို ဘယျလိုကုစားမလဲ
ယောင်ျကြားလေးတှေ အမြားစုက အပွာကားကွညျ့ရတာကို စိတျဝငျစားတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သာမနျထကျပိုပွီး ကွညျ့နမေယျ၊ မကွညျ့ရမနနေိုငျအောငျ ဖွဈလာမယျဆိုရငျတော့ အပွာကားတှကေို စှဲလမျးနတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအပွာကား စှဲလမျးမှုကို ဘယျလိုကုစားကွမလဲ…..???
၁။ တကယျလိငျဆကျဆံမှု လုပျဆောငျပါ။
အပွာကားစှဲလမျးမှုကို ဖြောကျဖကျြနိုငျဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးတဈခုကတော့ တကယျ့ လကျတှဘေ့ဝမှာ လိငျဆကျဆံမှု လုပျဆောငျဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ပုံမှနျလုပျဆောငျပေးနိုငျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ ဒါမှသာ သငျ့စိတျထဲက လှုံ့ဆျောမှုတှကေို လကျတှကေ့မ်ဘာမှာ ပုံဖျောလို့ရနိုငျမှာဖွဈပွီး အမွငျနဲ့သာယာမှုကနေ ရုနျးထှကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
၂။ တဈကိုယျရညျ အာသာဖွပေါ။
တကယျ့လိငျဆကျဆံမှုကို လုပျဆောငျဖို့ အခှငျ့အရေးမရဘူးဆိုရငျ နောကျထပျလုပျဆောငျသငျ့တဲ့ နညျးလမျးတဈခုကတော့ အာသာဖွတောပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့ သိပျပွောစရာလိုမယျမထငျပါဘူး။ အပွာကားကွညျ့ပွီဆိုကတညျးက မကျြလုံးနဲ့ လကျနဲ့တပွိုငျနကျလှုပျရှားကွသူတှေ မြားပါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အာသာဖွခွေငျးက လိငျစိတျနိုးကွားမှုကို လြော့ပါးသှားစပေါတယျ။
၃။ တကယျ့မိနျးကလေးတှနေဲ့ စကားပွောပါ။
အပွာကားစှဲနသေူတှဟော လူမှုရေးကို လဈလြူရှုထားတတျပွီး တဈယောကျတညျးနတေတျကွပါတယျ။ ဒီလို ပွငျပလောကနဲ့ ထိတှမှေု့နညျးတာက လူမှုဆကျဆံရေး စှမျးရညျကို ကဆြငျးစပွေီး အခငျြးခငျြးအပွနျအလှနျ ဆကျသှယျမှုလညျး အားနညျးသှားစပေါတယျ။ အပွာကားစှဲနတောကို ကုစားခငျြရငျတော့ ပွငျပလောကက တကယျ့မိနျးကလေးတှနေဲ့ အပေါငျးအသငျးလုပျ၊ စကားပွောဆို ဆကျသှယျပါ။ အပွာဇာတျလမျးတှမှော ပုံဖျောထားတဲ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ပုံစံနဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှကေ တကယျလကျတှနေဲ့တခွားစီပါ။ ဒါပမေယျ့ အပွာကားစှဲနသေူတှကေ အတူတူပဲလို့ ထငျနတေတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တကယျ့မိနျးကလေးတှနေဲ့ ပွောဆိုဆကျသှယျကွညျ့တဲ့အခါမှ ဒီထငျမွငျခကျြက မှားနတေယျဆိုတာ သဘောပေါကျလာမှာပါ။
၄။ မိဘတှနေဲ့ နပေါ။
တဈယောကျတညျးနတောက ကိုယျလုပျခငျြတာ လုပျဖို့ ပိုအားပေးရာရောကျပါတယျ။ တဈယောကျတညျးနခြေိနျတှမှော အဝတျအစား မဝတျပဲနတော၊ အရှကျကို ထိနျးနစေရာမလိုတာ၊ အပွာကားတှကေို စိတျကွိုကျကွညျ့နနေိုငျတာ စသဖွငျ့ ဒီကိစ်စဆီကို ရောကျသှားနိုငျခြေ မြားပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မိဘတှေ၊ ဆှမြေိုးသားခငျြးတှနေားမှာ နတော၊ စကားပွောနတော၊ အလုပျတှေ ၀ိုငျးလုပျပေးတာတှကေ တဈယောကျတညျးလုပျခငျြတာမလုပျရအောငျ ကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
၅။ ၀ါသနာအသဈတဈခု ရှာဖှလေုပျဆောငျပါ။
သငျ့အတှကျ စိတျဝငျစားစရာ၊ လုပျခငျြစရာ တဈခုခုမရှိတာကလညျး အပွာကားတှေ ကွညျ့ဖွဈစဖေို့ အကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့ ၀ါသနာတဈခုခုကို ရှာဖှေ လုပျဆောငျပါ။ တူရိယာပစ်စညျးတဈခုခု တီးတတျအောငျ သငျကွားတာ၊ ဘာသာစကားသငျတနျးတဈခုခု တကျတာ၊ အားကစားတဈခုခုလုပျတာ၊ စာဖတျတာ၊ စာရေးတာ စသဖွငျ့ တဈခုခုကို လုပျဆောငျကွညျ့ပါ။ သငျ့ရဲ့ ၀ါသနာသဈက အခြိနျတျောတျောမြားမြားကို ယူသှားတဲ့အတှကျ အပွာကားကွညျ့ဖွဈတဲ့ အခြိနျတှေ နညျးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous: အလုပ်မှာ စိတ်မပါတဲ့အခါ ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ အားပြန်ဖြည့်လိုက်ပါ
Next: အောင်မြင်သူတွေ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တဲ့အရာ (၅)ခု